Man City oo hogaamineysa liiska kooxaha ugu fursadaha badan Premier League xilli ciyaareedkan…(Kaalintee ayey kaga jiraan kooxdaada?) – Gool FM
(England) 12 Nof 2019. Shabakada caanka ah ee “ESPN” ayaa ku shaacisay boggeeda rasmiga ah baraha bulshada ee Twitter-ka tirakoob aad u xiiso badan ee ku saabsan kooxaha sameeyay fursadaha ugu badan horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Liverpool ayaa hogaanka u heysa miiska kala sareynta Premier League xilli ciyaareedkan 34 dhibcood, waxayna 9 dhibcood ka sareeyaan kooxda ay ku xilfaltamaan hanashada horyaalka ee Manchester City, kaddib guushii ay Reds kaga gaartay Skay Blues 3-0 Axadii la soo dhaafay.
Laakiin Manchester City ayaa hogaamineysa liiska kooxaha sameeyay fursadaha ugu badan horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan, kaddib 12 kulan ee ilaa iyo haatan laga ciyaaray, waxayna sameeyeen 199 fursadood, waxay u muuqataa arrin macquul ah marka la fiiriyo in weerarka City uu yahay midka ugu xoogan Premier League xilli ciyaareedkan, kaddib markii ay dhaliyeen 35 gool.
Booska labaad ee liiskan ayaa xoogaa u muuqdan mid layaab leh, maadaama aysan ku soo bixin Leicester City oo ah kooxda labaad ee ugu weerarka xoogan xilli ciyaareedkan maadaama ay dhaliyeen 29 gool, ama Liverpool oo ah kooxda sddexaad ee ugu weerarka xoogan kaddib markii ay dhaliyeen 28 gool.
Sheekada layaabka leh ayaa waxay tahay in kooxda ka dhisan Galbeedka magaalada London ee Chelsea uu hoggaaminayo Frank Lampard ay ku soo baxday booska labaad, kaddib markii ay sameeyeen 157 fursadood.
Liverpool ayaa ku jirta kaalinta seddexaad waxayna sameeyeen 155 fursadood, waxaa ku xiga Manchester United oo sameysay 132 fursadood, Leicester 126 fursadood, Everton 129 fursadood, Brighton 119 fursadood, Tottenham 118 fursadood, Aston Villa 118 fursadood iyo Arsenal oo ku jirta kaalinta 10-aad waxayna sameeysay 116aad fursadood.
“Waa waqtigii uu daafac ku guuleysan lahaa abaal-marinta Ballon d'Or” – Van Dijk